हो, सुरु–सुरुमा मैले देउवाजीको आलोचना नगरेकै हो ,तर पछि त मेरै कुरा पनि मान्न छाड्नु भयो – महामन्त्री कोइराला
भदौ ३,विराटनगर। प्रजातान्त्रिक विचार समाजले नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय नेतृत्वमा कोइराला परिवारको वर्चस्वलाई पुनःस्थापना गर्ने उद्देश्यका साथ शनिबार विराटनगरमा एक कार्यक्रम गर्‍यो। महामन्त्री शशाङ्कले कार्यक्रममा आफू वा शेखरमध्ये को नेतृत्वका लागि अघि बढ्ने स्पष्ट पारेनन्।
कार्यक्रमपछि सञ्चारकर्मीका जिज्ञासामा उनले भने ‘शेखर दा’सित सल्लाह नगरी केही हुन्न। उहाँसित छलफल गरेर मात्र भन्न सक्छु। जो भए पनि हामी दुई जनामध्ये एक हुने हो। समय आएपछि एकैमतको निर्णय आउने छ। को हुने भनेर अहिले नै निर्णय गर्ने बेला भएको छैन।’
कार्यक्रममा उपस्थित अन्य वक्ताहरूले कार्यकर्ताले काङ्ग्रेसमा कोइराला परिवारको नेतृत्व पुनः स्थापित भएको हेर्न चाहेको बताएका थिए। कार्यक्रममा कोइराला पक्षीय धेरै कार्यकर्ताले आगामी महाधिवेशनमा कोइराला परिवारको विरासत थाम्ने गरी दुबै कोइराला मिलेर आउनुपर्ने भनी माग गरेका थिए। तर, शशांकजस्तै डा. शेखर पनि यस विषयमा खुलेनन् ।
आफ्नो वा शशाङ्क, पार्टीको नेतृत्वमा कसले प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्ने विषयमा उनी पूर्ववत् मौन रहे।कतिपयले आफूलाई सभापति देउवाको साथ दिएको र उनको आलोचना नगरेको भन्ने आरोप लगाएको उल्लेख गर्दै महामन्त्री शशाङ्कले आफू देउवा वा पौडेल कसैका पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारे।
‘हो, सुरु–सुरुमा मैले देउवाजीको आलोचना नगरेकै हो, डिफेन्स गरेकै हो किनभने पार्टीको क्रियाकलापप्रति म महामन्त्रीको पनि जिम्मेवारी हुन्छ’, उनको भनाइ थियो, ‘तर पछि त मेरै कुरा पनि मान्न छाड्नु भयो। महासमितिकै बैठक बोलाऊँ भनेर उहाँलाई पटकपटक भनेँ, मान्नुभएन। विधान मस्यौदा समितिका लागि नाम दिनुस् भनेर देउवाजी र रामचन्द्रजी दुबै जनालाई धेरै पटक भनेँ, दिनुहुन्न।’
कार्यक्रममा पार्टीका महामन्त्री डा. शशाङ्क कोइराला, नेता डा. शेखर कोइराला र पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलासहितका नेताहरू सहभागी भएका थिए।